Ibhakede Amazinyo, adaptha, Cutting Edge, Bolt & Nut - Minter Imishini
Ibhakede namazinyo & adapters
Blades & imiphetho Cutting
Grader Ukuphela-bit ukunqwabelanisa
Ripper & shank & shank unogada
Ukuvikelwa Ibhakede bafake
uMvikeli ibha eseceleni
Phina & Isamba
Ibhakede Izinyo iphrofayela
Ibhakede adaptha iphrofayela
Cutting Edge iphrofayela
Isicelo Ukuze Ibhakede Izinyo Futhi adaptha
Isicelo Ukuze Cutting Edge Futhi Blades
IsiShayina GET umphakeli
Ningbo Mingji Machinery Co., Ltd kuyinto GET professional (phansi sihehe ithuluzi) umphakeli eChina ngenhloso umlando ezingaphezu kuka 10years.We kuphela ezikhethekile GET hhayi abanye futhi ukuthekelisa emazweni angaphezu kuka-20.
Kukhona egcwele umkhiqizo uhla ezingaphezu kuka 3,000 izinto onqenqemeni ukusika futhi izinto ezingaphezu kuka-2,000 ngokuba ebhakedeni amazinyo adapter.There kuthiwa ngqo esikhundleni izingxenye ngoba cishe izwe phambili imishini brand.
Okuqinile kanye inqubo ngamunye kusukela Ukukhetha impahla ukuze izimpahla lokuthumela ninake imininingwane ukukhiqizwa ukuqinisekisa zonke izingxenye e izindinganiso eziphakeme. ukuhlola imishini yokukhetha.
Fast ukulethwa isikhathi
Jwayelekile ukukhiqizwa phambili isikhathi phakathi 35days.And thina isitoko Kwezinye izingxenye okusheshayo ezihambayo kwabanye izidingo esiphuthumayo.
Ngenxa yethu umnyango ubuchwepheshe isipele futhi oseneminyaka engu-accmulated ukunikeza R & D ukusekela amakhasimende ethu, ngisho nakwezinye izingxenye ze enkulu ezimayini.
Isiqinisekiso futhi isevisi
Siyathembisa esikhundleni ngamunye ngamunye mahhala uma kukhona noma iyiphi inkinga izinga kwenzeka kithi ngaphandle normal usebenzisa method.Quick impendulo kumakhasimende, siyakhululeka isevisi yakho 24/7.
1.Professional e-GET ensimini nolwazi onothile imishini cishe osindayo kuka-10 eminyakeni.
2.We ngonanzelelo indinganiso ephakeme ekukhiqizeni.
inkonzo 3.Excellent at 24/7.
4.Fast ukulethwa isikhathi enyangeni eyodwa.
5.Strong ithimba ubuchwepheshe lubuye ukwesekwa R & ukuthuthukiswa D.
6.Full umkhiqizo uhla kuhlanganise ebhakedeni amazinyo, adaptha, ohlangothini umsiki, imiphetho ukusika futhi ebhakedeni bafake izingxenye.
7.Offer OEM nokubambisana
8.Good ngempendulo futhi ezingavamile ekhononda phakathi amakhasimende ethu
imikhiqizo 9.All ku ukuqina ezinhle futhi impahla ezinhle lokukhanda.
10.reasonable futhi amanani abiza
11.More efanelekayo Ukukhetha impahla eluhlaza ku emakethe wakho.
ebhakedeni namazinyo & adaptha
Ukuqhamuka futhi ibanga izindwani
Ripper shank & unogada
Ukuvikelwa ebhakedeni bafake
Ningbo Minter Machinery Co., Ltd is a professional GET umphakeli elise China.Main imikhiqizo Ibhakede amazinyo, adaptha Ukuqhamuka, umshudo & nut, pin & isamba Chocky inkantini nokuvikelwa ebhakedeni bafake. Sinikeza ngqo esikhundleni izingxenye ingasetshenziswa Excavator, Loader, ngogandaganda, scarifier, ibanga neqhwa amageja, kokubili emkhakheni wezokwakha futhi minning wemboni.
Futhi izingxenye zethu kungaba zokuhamba kakhulu imishini brand like Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Doosan, Volvo, Jcb ezinye imishini Chinese ezifana Sany XCMG, Liugong nokunye.
Yunlong Idolobha District Yinzhou District Ningbo China
Ibhakede namazinyo adaptha
Popular Imishini kwimodi & izinyo uhlelo
Okufakiwe Products - Ibalazwe - Imigomo Hambayo